कुन समयमा यौन सम्पर्क गर्दा गर्भ बस्दैन् ? - Internet Khabar
कुन समयमा यौन सम्पर्क गर्दा गर्भ बस्दैन् ?
February 28, 2018 July 17, 2018 Internet Khabar Desk
गर्भ रहन हामिले चाहेजस्तो सजिलो छैन्। हुन त कहिलेकाँहि अपत्यारिलो अबस्थामा पनि गर्भ बस्न सक्छ ।गर्भ रहन धेरै कुरा मिल्नुपर्छ। कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एक मात्र यौनसम्पर्कमा नै गर्भ रहन्छ, तर सधै यस्तो हुँदैन।
यौनसम्पर्क का बेला पुरुषको वीर्यस्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीटमध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीमा पुग्छन् । त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्ब अण्डासँग असंख्य शुक्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ ।
यी कुरा हुनु आवश्यक छ । तपाईंलाई थाहै होला, महिलाको डिम्ब महिनाको एकपटक मात्र निष्कासन हुन्छ। डिम्ब निष्कासन हुने समय नजिक गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ ।
शुक्रकीटसँग मिलन हुन डिम्ब निस्किएको हुनु आवश्यक छ । बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के भने डिम्ब निस्किएको यस्तै १४ दिनमा महिनावारी सुरु हुन्छ ।
३१, ११, २० हुन्छ, अर्थात् २० औं दिनभन्दा पछि यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रहन सक्छ । यौन रोग र एचआईभीको संक्रमणबाट बच्न कन्डमको नियमित तथा सही प्रयोग अनिवार्य छ ।
सेक्स गरेपछि पिसाब फेरेमा पनि गर्भ रहँदैन ।
चिसोमा किन दुख्छ जोर्नी, यसबाट कसरी बच्ने ?
December 15, 2017 August 13, 2018